Toliara :: Mitsipaka ny fitrandrahana fasimainty ny mponina • AoRaha
Faritra • Sosialy
Toliara Mitsipaka ny fitrandrahana fasimainty ny mponina
Miakatra ny mari-pana. Tonga eto Antananarivo ireo solontenan’ny mponina tsy mankasitraka ny fitrandrahana fasimainty ao Toliara. Mandà hatramin’ny farany ny hanatanterahan’ny orinasa Base Toliara ny tetikasa fanorenana seranan-tsambo hanondranana fasimainty ao Andaboly izy ireo, raha ny fanambaràna omaly teny Tsiadana.
“Manao antso avo amin’izao fitondram-panjakana vaovao izao izahay mba hijerena haingana ity raharaha ity. Tsy hiala amin’ny taninay izahay satria ao ny fasan-drazana, ny asa fivelomana ary ny maha izy anay tsirairay avy”, raha ny fanazavan’ireo solontenan’ny mponina ireo hatrany.
Manoloana ny ahiahin’ny mponina amin’ny tsy fahafahana mampiasa ny morontsiraka amin’ny jono kosa, dia efa nampanantena azy ireo ny tompon’andraikitra fa manana traikefa amin’izany ka heverin’izy ireo fa tsy hiteraka olana ho an’ny mponina ny tetikasa fitrandrahana. Na teo aza izany, hita izao fa mihamafy ny fanoherana ataon’ny mponina ao Toliara amin’ity firandrahana fasimainty ity. Andrasana izay mety ho fandraisan’ andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana ity olana ity.
Fanarahamaso n’ny mponina :: Manova sy manatsara fomba fiasa ny fokontany sasany